नेपालकै सबैभन्दा राम्रो Hand Writing भएकी १३ बर्षकी नानी । ८ कक्षामा पढ्ने प्रियँकाले टाईप गरे जस्तो अक्षर लेख्छिन् (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपालकै सबैभन्दा राम्रो Hand Writing भएकी १३ बर्षकी नानी । ८ कक्षामा पढ्ने प्रियँकाले टाईप गरे जस्तो अक्षर लेख्छिन् (भिडियो हेर्नुस)
admin August 4, 2019 समाचार	0
हामीलाई हाम्रा बालबालिकाहरुले राम्रो लेखे र पढे भने कति आनन्द मिल्छ । आफ्नो बच्चाहरुले पढाईमा प्रगति गर्दा खुशी नहुने अभिभावक को नै होला र यो संसारमा । लेखेको कुरा मज्जाले पढ्न सक्ने बिद्यार्थी कक्षा कोठामै अव्बल मानिन्छ अझै उत्कृष्ट लेखन शैली अर्थात हेण्ड राईटिंग भएका बिद्यार्थी त सबैको प्यारो हुन्छन् । सबै अभिभावकहरु आफ्ना बच्चाहरुले उत्कृष्ट हेण्ड राईटिंग लेखुन भन्ने सोचमै हुन्छन् ।
आज हामी नेपालकै उत्कृष्ट हेण्ड राईटिंग भएकी प्रियंका भण्डारीको भिडियो तपाईहरुलाई देखाउंदैछौं । १३ बर्षकी प्रियंका भण्डारी काठमाडौंको नेपालटारमा रहेको नेशन मोडेल इग्लिस स्कुलमा आठ कक्षामा पढ्दछिन् ।
पढाईमा पनि अव्वल प्रियंका २०७५ सालको राष्ट्रिय स्तरको हेण्ड राईटिंग प्रतियोगितामा हजारौं बिद्यार्थीहरुलाई पछि पार्दै प्रथम भईन् । नेपाली र अंग्रेजी दुवै अक्षर उत्कृष्ठ लेख्ने प्रियंकाले स्कुल स्तरिय प्रतियोगिता र अन्य बिभिन्न प्रतियोगितामा आफ्नो कुशल अक्षरका कारण थुप्रै पुरस्कारहरु जितिसकेकी छिन् ।
दर्शकबृन्द त्यसो त सामाजिक सन्जालमा यसपुर्व अर्की नानी प्रकृति मल्लको हेण्ड राईटिंगको चर्चा पनि हामीले सुनेकै छौं । प्रकृतिले अन्तराष्ट्रिय हेण्ट राईटिंग प्रतियोगिता समेत जितेकी थिईन् तर २०७५ सालको राष्ट्रिय स्तरको हेण्ड राईटिंग प्रतियोगितामा भने प्रियंका उत्कृष्ठ भएकी हुन् । प्रियंकाको घरमै पुग्दा उने आफुले कोरेका चित्रहरु पनि देखाईन् । भविष्यमा पढाई पुरा गरेर एउटा कुशल कलाकार बन्ने सोच राखेकी प्रियंका फुर्सदको समयमा नृत्य पनि गर्दछिन् । उनले आफुले जितेका पुरस्कारहरुले हामीलाई देखाईन् । दर्शकबृन्द, कसरी राम्रो हेड राईटिंग लेख्ने त ? आउनुहोस प्रियंका भण्डारीसंग हामीले गरेको कुराकानी पुरा हेरेर साथ दिनुहोस ।
अमेरिकामा गएर नीलो फिल्म खेल्ने दुई नेपाली ‘पो*र्न स्टार’ को चर्चा किन भयो ?
दुई मिनेटमै बच्चा गायब ? घर भित्रकै मान्छेले बाबुलाई ट्यांकिमा हालेको खुल्यो रहस्य (भिडियो)
दुःखद खबरः गुल्मीमा गयो भिषण पहिरो, अहिलेसम्म १० जनाकाे ज्यान गयो